Mihenjana ny tady eo amin’i Etiopia sy Sodàna, iadian’izy ireo ny faritr’i Al-Fashqa · Global Voices teny Malagasy
Ady iray mety hampiditra ilay faritra ho any amin'ny kizo
Nandika (fr) i Habiba M.Taher
Voadika ny 01 Febroary 2021 16:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Español, русский, Français, English
Lehilahy iray miasa eny an-tsaha ao Al-Qadarif, Sodàna. Sehatra isian'ny ady efa nandritra ny taona maro io faritra iray ifandroritana ao amin'ny sisintany iraisan'i Etiôpia sy Sodàna io. Sary an'i Bibi Eng, nampiasàna lisansa CC BY-NC-SA 4.0.
Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra.
Tsy mitsahatra mitombo ny fihenjanan'ny tady ao amin'ilay faritra sisintany iraisan'i Etiôpia sy Sodàna ao amin'ny faritra mamokatra any Al-Fashqa, taorian'ireo herinandro maro nisian'ny fifandonana nifanaovan'ny tafika sodaney sy ny tafika etiôpiàna tamin'ny Desambra.
Ny 14 Janoary, dimy raha kely indrindra ireo vehivavy maty nandritra ny andiam-panafihana farany tany amin'ny sisintany.
Nampangain'i Dina Mufti, mpitondra tenin'ny ministeran'ny raharaha ivelany ao Etiôpia , ny tafika sodaney ho tsy nanaja sy nandingana ny sisintany etiôpiàna, izay nadikany ho toy ny fikasàna hamaly faty ireo milisin-tsisintany etiôpiàna nanafika ireo sodaney mpamboly.
Ara-teknika dia ao anatin'ny faritanin'i Sodàna, any amin'ny fanjakan'i Al-Qadarif no misy ny faritr'i Al-Fashqa, saingy nipetraka efa an-taonany marobe tao ry zareo Etiôpiàna, ary efa fotoana naharitra ela no nisy ny fifandonana eo amin'ireo vondrona roa ireo.
Sarintany maneho an'i Etiôpia miloko maitso, ary Sodàna miloko volomboasary. Sary an'i PlanespotterA320 tao amin'ny Wikimedia Commons, nampiasàna lisansa CC0.
Hatramin'ny Novambra 2020, vao mainka nihamafy ny fihenjanana rehefa nisy Etiôpiàna 50.000 mpitsoaponenana nandositra nanatona ny sisintany manasaraka an'i Sodàna sy Etiôpia, rehefa nipoaka ny ady tao amin'ilay faritra farany avaratra indrindra ao Tigré, nifanaovan'ny governemanta federaly etiôpiàna sy ny Mandatehezana ho fanafahana ny vahoaka ao Tigré (TPLF), antoko pôlitika iray ao amin'ny faritra.
Omar Qamar al-Din, minisitra mpisolo toerana misahana ny raharaha ivelany ao Sodàna, niaro ny tafika sodaney, tamin'ny filazàna fa tao anatin'ny faritry ny sisintany tao Sodàna izy ireo no nihetsika. Nampiany hoe tsy mitady ny hisian'ny ady i Sodàna [ar] raha tsy hoe voahitsakitsaka ny sisintaniny.
Ny 15 Desambra, nilaza ho tratry ny velapandrika nataon'ireo milisy etiôpiàna ny tafika sodaney raha iny izy nanao sava hao ny faritra an-tendrombohitra tao Abu Tor iny. Fanafihana nahafatesana olona efatra raha kely indrindra ary naharatràna am-polony tamin'ireo miaramila sodaney.
Hamdok, praiminisitra sodaney, nibitsika ny ahiahiny momba io toedraharaha io, nilaza hoe :
bitsika voalohany : Lazain'ny fanambaràna iray nataon'ny ministera fa tohizan'ny Filankevitr'ireo Minisitra ny fanarahana maso akaiky sy am-pahalinana ireo zavatra rehetra mitranga ao amin'ilay firenena rahavavy, Etiôpia, izay efa ho herinandro enina teo ho eo no nanombohany. An'aliny maro ireo mpitsoaponenna noraisin'ny firenentsika rehefa nandositra avy any amin'ny sisintany atsinanana, ary tamin'ny fahalalahan-tànana efa ahafantarana ny vahoakantsika na eo aza ny zavamisy ara-toekarena sarotra sy voafetra iainantsika.
bitsika faharoa : Omaly, Talata alina, raha iny niverina avy any amin'ny faritra manodidina ny tendrombohitra Abu Tor ao anatin'ny sisintanintsika iny ny tafika, dia tratry ny velapandrika nataona miaramila sy milisy etiôpiàna vitsivitsy tao anatin'ny faritany sodaney, niteraka fahafatesana ary fanimban-javatra.
bitsika fahatelo : Ambaran'ny Filankevitr'ireo Minisitra ny fanohanany ny tafika izay manentsina ny banga ary miaro ny firenena, tamin'ny fanamafisany ny fitokisany amin'ny fahaizamanaon'ny tafitsika mba hiarovana ny sisintanintsika amin'izay rehetra mety ho herisetra.
Nandritra ny volana Desambra 2020, nitarin'ny tafika sodaney tany amin'ny faritra lehibe indrindra tao Al-Fashqa ny fanarahamaso ataony, ary taorian'ny nanandramany hitody any amin'ny toerana fanarahamaso farany, vitany ny naka ny fifehezana ny faritra manontolo nanomboka tamin'ny 1 Janoary teo.
Ny 13 Desambra, nisy delegasiôna ambony avy ao Sodàna nandeha nankany Etiôpia, ka tanjona ny hanao fifampidinihana mandritra ny andro roa, saingy taorian'ny ora vitsivitsy monja, niverina nankany Karthoum ilay delegasiôna, nahatonga fametrahana fanontaniana marobe.
Ny tantaran'i Al-Fashqa
Eo ambany fifehezana sodaney ilay faritra miteraka fifandroritana ao Al-Fashqa, araka ny fifanarahana iray nifanaovan'ny anglisy sy ny etiôpiàna vita sonia tamin'ny 1902, teo amin'ny Amperora etiôpiàna Menelik II sy Grande-Bretagne nisolo tena an'i Sodàna, fony Sodàna mbola zanatany britanika. Io fifanarahana io dia mamaritra ireo sisintany sodaney iraisany amin'i Etiôpia manaraka ireto fepetra ireto :
Ny fanapahankevitra niraisan'ny governemanta roa tonta momba ny sisintany iraisan'i Sodàna sy Etiôpia dia ho toy izao: ireo tsipika nolokoina mena eo amin'ny sarintany araikitra amin'ity Fifanarahana ity, atao dika mitovy, ary voasoritra manomboka ao Kher Um Hagar ao Gallabat, hatreo amin'ny Nil Bleu, Baro, Pibor sy ny renirano Akobo hatrany Melile, ary manomboka eo ka hatrany amin'ny fifanojoan'ny fehintany 6° ao avaratra sy ny zarahasina 35° ao atsinanan'i Greenwich.
Misy dika iray avy amin'ilay sarintany, natonta tamin'ny 1909 tany Londona, Angletera, azo jerena ety anaty tambajotra.
Hatramin'ny 1902, ireo tsatoka manondro mazava ny tsipika manasaraka ny roa tonta no nisoroka ireo ady sisintany, saingy noho ny fisian'ny fihotsahana natoraly, tsy misy hita intsony ireny tsatoka ireny.
Tamin'ny 1996, nobodoin'ireo Etiôpiàna nipetrahana ny tao Al-Fashqa ary, rehefa nifandimby ny taona, dia nanorina andiana mpamboly tao ry zareo.
Hatramin'izao andro izao, misy ireo milisy etiôpiàna mamono sivily sodaney mba hakàna ny vokatr'izy ireo rehefa tonga ny fotoana fijinjàna. Endrika manambara ny mety ho fisiana fampiasambola mahazo fanohanana avy amin'ny governemanta etiôpiàna ireo arabe mampitohy ireo andiana mpamboly sy ny ao anatin'i Etiôpia.
Ilay lefitry ny praiminisitra fahiny tao Etiôpia, Demeke Mekonnen, niaky fa Al-Fashqa dia faritra sodaney, fa izay mitranga eny an-kianja kosa dia mifanohitra amin'ireny fifanarahana ireny sy ny kabary aely amin'ny fampitambaovao.
Ady an-kafetsena tsy miseho vatana ve ?
Raha mbola mihamafy ny fifandiran'i Egipta sy Etiôpia momba ilay Tohodrano Goavan'ny Fahaterahan'i Etiopia Indray(le GERD), misy ny sasantsasany mandefa ny vinavina hoe mety hitodika amin'ny fanaovana ady tsy miseho vatana iarahany amin'i Egipta i Sodàna noho ny ady efa ifanaovany manokana amin'i Etiôpia.
Suleiman Dedefo, masoivohon'i Etiôpia ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, nibitsika hoe:
Ny fikasan'ny Egyptiàna hanao ady tsy mifanatri-tava amin'i Etiôpia amin'ny alàlan'ny fananiham-bohitr'i Sodàna dia mampahatsiahy antsika ny ady iray mitovitovy amin'io tamin'ny 1974 nataon'i Siad Barre, [filoha tamin'izany nitondra] an'i Sômalia. Mahazendana, ny TPFL no lasa mpisehatra fototra ho an'i Egipta nandritra ireo fikasàna ady roa tsy mivantana ireo.
Ny Zoma taorian'izay, 15 Janoary 2021, nandritra ny antsafa iray ho an'ny gazety, nilaza i Muhammad Al-Faki Suleiman, mpikambana ao anatin'ny Filankevitra momba ny Fiandrianana ao Sodàna :
an'i Sodàna i Al-Fashqa ary takianay amin'ireo manampahefana etiôpiàna ny hisintahany amin'ireo toerana roa ao amin'ny sisintany.
Tsy misy na iza na iza soloinay tena amin'ity ady ity ary lainga daholo izay rehetra nafafy.
Tsy izahay no nandray fanapahankevitra hihantsy ady, fa zonay kosa ny manaparitaka ny tafikay hatrany amin'ny toerana farany indrindra fanarahamaso ny sisintany ao anatin'ny faritry ny firenena sodaney.
Afaka hiatrika ady izahay, saingy vahaolana am-pilaminana no laharam-pahamehana ho anay.
Ny fanapahankevitra hanaparitaka tafika tany atsinanana dia nahazoana ny faneken'ny Filankevi-Pilaminana sy Fiarovana.
Ny 16 Janoary, nanambara i Abdel Fattah al-Burhan, lehiben'ny Filankevitra momba ny fiandrianana sodaney fa neken'ny Filankevitra ny hanapariahana tafika sodaney ho fiantohana ny sisintany iraisampirenena ikambanany amin'i Etiôpia, tafiditra ao anatin'ilay hetsika ara-tafika an'ny praiminisitra Abiy Ahmed izay mikendry ny hanaisotra ny fiadiana any am-pelatanan'ireo mpikatroky ny TPLF, mandateheza ho fanafahana ny vahoakan'i Tigré. Nohamafisiny ihany koa fa tao anatin'ny faritra anatin'ny sisintanin'i Sodàna ihany no naparitaka ny miaramila sodaney.
Samy tsy misy mahazo tombony amin'ny ady ny firenena roa tonta. Manamafy i Sodàna fa ao anatin'ny faritaniny ihany izy no mihetsika, ary Etiôpia manamafy fa milisy no nanao ireo lazaina fa heloka bevava nampiharina tamin'ireo Sodaney mpamboly – fa tsy ny tafi-panjakana ara-dalàna.
Raha tsy maintsy ho vaky ny ady ato ho ato, mety hampiditra ilay faritra ho anatin'ny kizo izany, indrindra fa ny mety hisian'ny fifanandrifian'izany amina fifandirana iray hafa izay vao mipongatra eo amin'i Sômalia sy Kenya.